Ndezvipi zvakanyanya kuwanikwa se SEO mitemo?
Mazuva ano, Google iri kuratidza mitsva yekutsvaga, iyo iri kure nemamwe madzinza (ndinoreva kungoshandiswa kwehupenyu hwemasayithi) takaona makore mashoma asati apfuura. Tsvakurudzo dzeGoogle dzekutsvaga, pamwe chete neSeO primary, taramba dzichichinja. Iye zvino injini dzekutsvaga dzinoratidzira zvinopfuura izvo chete zvaunokumbira - sezvo SERPs kuGoogle, uyewo mu Yahoo neBing zviri kuvhara iye zvino mifananidzo yakabatana, mavhidhiyo, zvemagariro evanhu, uyewo mawopu emunzvimbo. Saka, kana uri kutengesa pane mamwe magetsi uye kutengesa semabhizimisi emabhizimisi, ita nechokwadi chekuona zvimwe zvezvinhu zvakakosha zvikuru zve SEO nhasi. Iwe webhusaiti yako inoda kutaridzika zviri nani paIndaneti uyezve kuchitsvaga here? Zvino ngatifungei mune dzimwe nzira dzakanakisisa dzemazuva ano ekutsvaga Engine Engine Optimization:
Local SEO inzvimbo yakakosha iwe kana bhizinesi rako riri kutengesa kumunzvimbo mazita uye kuongororwa kuti awane chiratidzo mukutevera neGoogle Maps, somuenzaniso. Maererano nevekupedzisira SEO mitemo mumunharaunda yekugadzirisa, ndinokurudzira kuenda kune:
Zvitsauko. Iva nekutarisa kaviri kuti unyatsonzwisisa ruzivo pamusoro pebhizimisi rako rinowanikwa mune dzakawanda dzinorumbidzwa zvinyorwa paInternet sezvinobvira. Ingotanga neGoogle rondedzero pachayo. Chinhu chinokosha apa ndechekushandura kwako, ndinoreva kuti mazita ako ose anofanira kunge akabatanidzwa, e. g. , kana ukasarudza kushandisa chimwe chinhu chakadai se "Str. "Nekududzirwa kwepfupi kwe" Migwagwa "pajiji yako yeGoogle Places, chengetedza zvimwe zvinyorwa kuratidza zvakafanana.
Google Places. Kuchengetedza SEO yewebsite yako, iwe unogona kuita nyore zvimwe zvinhu zveGoogle Places peji yako. Ita zvakanaka-yakanyatsogadziriswa nekubatanidza zvakaenzana zvikamu. Uyewo, kana zvichibvira, iva nechokwadi chekugadzira hukama hwakarurama pakati peji rako uye peji-yepaji yakananga yeji yewebhu.
yakasimba paIndaneti. Kazhinji kazhinji, pane maongorori eGoogle chete anowanikwa mune runyorwa rwaSERPs. Saka, iwe unogona kuvaka hune hutano hwakanyanya pane yebhizinesi rebhizimisi rako nekuva nekuongororwa kwakawanda kubva kune dzimwe nzvimbo zvakadai seSpages, Trip Advisor, Yelp, nezvimwe zvakadaro.
Chinhu chinotevera ndechekuenzaniswa zvakakwana nemazuva ano eSeO maitiro ari kushanda mundima ye Social Social. Ngatitarisei - nguva iyo apo kutsvakwa pachako uye nzira dzehupfambidzani dziri kuuya zvakasiyana zvakapfuura kare kare. Nhasi, webhusaiti yega yega yepaIndaneti yakanyatsotarisana nezviratidzo zvakasiyana-siyana zvevanhu, zvakadai sekuda pa Facebook, kugoverana pa Twitter, nezvimwe. Uyezve, ikozvino mitsva yekutsvaga yakave yakanyanya kufanana nemunhu mumwe nomumwe. Ndicho chikonzero kushanda paSocial Media Marketing inOFANIRA.
Shure kwezvose, kuita maitiro ezvinyorwa zvemashoko ako nemishandisirwo emitemo, edza kufungisisa zvakawanda zvevanhu vari kurarama, panzvimbo pekutsvaga. Yeuka, kutsvakurudza kwakakosha kwemashoko kwakagara kuripo mushure meSOO yakawanda. Nezvechokwadi chemazuva ano, zvisinei, webhusaiti yako yehutano uye mazwi makuru anofanira kunge ari kunyanya kuteerera kune vashandi chaivo kupfuura kare. Ndicho chikonzero iwe unofanirwa kurega kufunga nezvemashoko makuru sezvinonzi technic data. Kuita tsvakurudzo inotyisa, ramba uchifunga nezvechinangwa chevanhu vapenyu vanozoshandisa mazwi enyu akakodzera ekutsvaga kwavo kutsvaga kutsvaga Source .